Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ịlaghachi mmasị ọhụrụ na njem na njem nlegharị anya ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Editorial • Education • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Afọ abụọ gara aga adịghị mfe. Ndị ọkachamara njem nlegharị anya ahụla ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke afọ ole na ole gara aga nwere nnukwu ihe ịga nke ọma ugbu a chọrọ ịlụ ọgụ maka nlanarị ha. N'ezie, ọrịa na-efe efe n'ụwa bụ isi ihe kpatara ọdịda a. Otú ọ dị, ọ ga-abụ mmejọ ịta nsogbu niile nke ụlọ ọrụ ahụ naanị na ọrịa na-efe efe. Ndị na-eleru anya nke ọma na ọnọdụ njem na njem nlegharị anya achọpụtalarị nsogbu ndị nwere ike ime, site na ọrụ ndị ahịa na-adịghị mma ruo n'ịfe njem nlegharị anya nanị ọnwa 24 gara aga.
Ọtụtụ mgbe, ihe a na-ekwu maka ọdịda a bụ ọnụ ahịa tiketi ụgbọ elu dị elu na eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ achụmnta ego amalitela ịchọta ụzọ ọzọ ha ga-esi na-ekwurịta okwu nke na-adịchaghị ọnụ ma dị irè karị. N'ihi Covid-19 mkpa ịkparịta ụka n'enweghị njem mere ka omume a dịkwuo elu. Mgbe anyị na di na nwunye na-eme njem na-enwe nsogbu akụ na ụba na-adịghị ike na nsogbu ahụike dịka ọrịa na-efe efe, o doro anya na njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ njem ga-achọta ụzọ ọhụrụ na ihe okike. Ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya enweghịzi ike ịdị na-agafe agafe. Ọ ghaghị ịkwụsị iche echiche na ihe ndị na-eme ụlọ ọrụ ahụ, kama bụrụ ihe na-akpali akpali maka ihe ọhụrụ na ihe okike. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya ga-aga nke ọma n'oge ndị a na-adịghị ahụkebe na ihe ịma aka, ọ ga-emerịrị karịa ịhụ onwe ya dị ka onye a metụtara akụ na ụba ma ọ bụ ajọ omume ndị ọzọ; ọ ga-enyochakwa onwe ya ka ọ hụ ebe ya onwe ya nwekwara ike imeziwanye.
Ikekwe ihe kachasị egwu maka ụlọ ọrụ ntụrụndụ (na n'ókè dị nta na ụlọ ọrụ njem azụmahịa) bụ eziokwu na njem gbanwere ihe ọchị nke njem n'ime ụwa nke ụkpụrụ na ihe ndị a chọrọ. N'oge ọrịa na-adịbeghị anya, ndị njem mbụ na-ekwukarị na ahụ eruola ha ala ịghara ịbanye n'ụgbọelu ma ọ bụ mee njem dị ogologo n'ọsọ ụlọ ọrụ maka ịrụ ọrụ nke ọma na nyocha ọnụọgụ, ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nwere ike chefuola na onye njem ọ bụla na-anọchite anya ụwa. ya / ya onwe ya na àgwà ga-mgbe niile override nke ukwu.
Karịsịa na ụlọ ọrụ njem ntụrụndụ, enweghị ntụrụndụ na obi ụtọ a pụtara na ọ dị ntakịrị ma dị ntakịrị ihe mere ị ga-eji chọọ njem na isonye na ahụmahụ njem. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ahịa ụlọ ahịa ọ bụla na-adị otu ma ọ bụ ọ bụrụ na otu menu dị n'agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọ bụla, gịnị ma ị nọrọ naanị n'ụlọ? Kedu ihe kpatara onye ọ bụla ga-achọ idobe onwe ya n'ihe egwu na nsogbu nke njem, ma ọ bụrụ na ndị ọrụ mkparị na mpako na ndị mpako na-agbaji agbaji njem ahụ? Ndị a bụ ajụjụ miri emi nke ndị ọkachamara njem & njem kwesịrị ịjụ.
Iji nyere mpaghara ma ọ bụ mmasị gị aka tinye ntakịrị nke ihunanya na ihe ọchị na ụlọ ọrụ gị, Njem nleta njem nleta na-enye aro ndị a.
Mesie ihe obodo gị ike na-enye pụrụ iche. Agbalịla ịbụ ihe niile nye mmadụ niile. Na-anọchi anya ihe pụrụ iche. Jụọ onwe gị: Kedu ihe na-eme obodo ma ọ bụ mmasị gị dị iche na nke pụrụ iche na ndị asọmpi gị? Kedu ka obodo gị si eme mmemme n'otu n'otu? Ị bụ onye ọbịa n'obodo gị, ị ga-echeta ya ụbọchị ole na ole ka ị gachara, ka ọ ga-abụ naanị otu ebe ọzọ na maapụ? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị naanị na-enye ahụmahụ dị n'èzí, kama chepụta ahụmịhe ahụ n'otu n'otu, mee ka ụzọ njem gị bụrụ ihe pụrụ iche, ma ọ bụ mepụta ihe pụrụ iche gbasara osimiri gị ma ọ bụ ahụmahụ osimiri. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, obodo gị ma ọ bụ ebe ị na-aga bụ ihe okike nke echiche wee kwe ka echiche ahụ na-agba ọsọ ma na-emepụta ahụmahụ ọhụrụ. Gbalịa ịhụ obodo gị ma ọ bụ mmasị site n'anya ndị ahịa gị.
-Bụrụ onye na-enweghị isi. Ọ bụrụ na obodo ndị ọzọ na-ewu ebe egwuregwu gọlfụ, rụzie ihe ọzọ, chee echiche obodo gị ma ọ bụ ebe ị na-aga dị ka obodo ọzọ. Ndị mmadụ achọghị otu nri, asụsụ, na ụdị nke ha nwere laa azụ. Na-ere ọ bụghị naanị ahụmahụ kamakwa ebe nchekwa site na ịdị iche na ebe ndị ọzọ. Ree onwe gị ọ bụghị onye ọzọ!
-Mepụta ihe ọchị site na mmepe ngwaahịa. Kpọsa ozi nta ma nyekwuo ya. Na-agafe ihe ndị a tụrụ anya ya mgbe niile ma ghara ibufe okwu gị. Ụdị ahịa kachasị mma bụ ezigbo ngwaahịa na ezigbo ọrụ. Nye ihe nkwa gị na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ọhaneze ghọtara na ebe ndị na-abịa oge ga-enweta ụgwọ ọrụ afọ ha n'ime ọnwa ole na ole. Enwere ike ịnakwere ọnụ ahịa dị elu mana ọ dịghị mgbe ọ bụla a ga-anabata ya.
- Jide n'aka na ndị na-ejere ndị ahịa gị ozi na-ekpori ndụ na ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ gị kpọrọ ndị ọbịa asị, mgbe ahụ ozi ha na-enye bụ nke na-emebi echiche nke ịbụ ndị pụrụ iche. Ọtụtụ mgbe, ndị njikwa na-enwe mmasị na njem ego nke onwe ha karịa na ahụmahụ onye ezumike. Onye ọrụ nke pụrụ iche, na-akpa ọchị, ma ọ bụ na-eme ka ndị mmadụ pụọ na-enwe mmetụta pụrụ iche bara uru ọtụtụ puku dollar na mgbasa ozi. Onye njikwa njem ọ bụla na ụlọ oriri na ọṅụṅụ GM kwesịrị ịrụ ọrụ ọ bụla na ụlọ ọrụ ya ọbụlagodi otu ugboro n'afọ. Ọtụtụ mgbe, ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na-agbasi mbọ ike maka ala ala karịa ndị ọrụ ha bụkwa ụmụ mmadụ nwere mgbu na mgbu, ọchịchọ na mkpa.